कहाँ पुग्यो रुस्लान थ्री स्टारको मुद्दा ? खोइ छ करोड रुपैयाँ ? | Hamro Khelkud
एभीसी सेन्ट्रल जोन : किर्गीस्तान विरुद्ध माल्दिभ्स
किङ्स र कुमारीलाई उपाधि, फुटबलर सन्तोष सम्मानित
पर्सिजाको जितमा रोहित म्यान अफ दि म्याच
उज्वेकिस्तानसँग साविक विजेता तुर्किमिनिस्तान स्तब्ध
बार्सिलोनालाई चोटको पिरलो, डेम्बेले पनि थपिए
कहाँ पुग्यो रुस्लान थ्री स्टारको मुद्दा ? खोइ छ करोड रुपैयाँ ?
बुधबार, माघ १९, २०७३
डिसेम्बरको घटना हो , छनोट चरण पार गरिसकेको रुस्लान थ्री स्टार क्लबले क्लब स्तरिय महादेसिय प्रतियोगिता खेल्न पाएन । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सचिवालयले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को पत्राचार (इमेल) लाई वेवास्ता गरेको कारण सो प्रतियोगितामा थ्री स्टार घरमै बसेर मंगोलियको इर्चिम भने खेल्न जाने भयो ।
डिसेम्बरको घटना पछि सामाजिक सन्जाल र संचारमाध्यमहरुमा सो घटनाको समाचारले भरिएका थिए , नेपाली फुटबलमा नियमन निकायको लापरबाही छताछुल्ला भएको थियो । केही दिनको अन्तरालमा थ्री स्टारले पत्रकार सम्मेलन गरी क्षतीपूर्ति स्वरुप एन्फा सँग छ करोड नेपाली रुपैया माग गरेको थियो ।
यही घटनाका सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने भन्दै एन्फाले आफ्नै उपाध्यक्ष वीर बहादुर खड्काको सम्योजकत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । अर्को तिर थ्रीस्टारले आफु दुःखमा परेपछि हार गुहार गर्दै क्लब सम्योजन समिती खडा गर्ने भूमिका खेल्यो ।
डिसेम्बरको मध्य लगभग तातेको यो बिषय भने नेपाली भुगोलमा जाडो बढे सगै सेलाएको छ । त्यही विषयले निकास नपाउन्जेलका लागि भन्दै थ्री स्टारले मोफसलमा भइरहेका कुनै पनि नकआउट प्रतियोगितामा भाग लिएन । थ्री स्टारका लागि मोफसल एकाध फुटबल नखेल्नु ठूलो विषय होइन । उसले नेपाली फुटबलमा यस्ता नजिर पटक पटक स्थापित गरिसकेको छ । अहिलेको परीपेक्षमा एन्फाले थ्री स्टारलाई भित्रभित्रै मिलायो कि ? थ्री स्टार आँफै मौन भयो वा उ के गर्दैछ वा खडा भएको संयोजन समिति के गर्दैछ भन्ने आमसञ्चारमा देखिएको छैन ।
नेपाली फुटबल जगतमा कतिले त्यसलाई देशद्रोह सँग जोडे भने , कसैले एन्फा महासचिव धिरेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागे , चम्के तर दुईचार दिन । आम नेपाली फुटबल समर्थक भने यो कुरा सेलाएको देख्दा सायद म जस्तै अचम्मित होलान , वा उनीहरु ले पनि भुले । न नेपाली फुटबलका बिषयमा मुलधार ठडिएका वेभहरुले यो घटना फलो अप नै गरे न थ्री स्टारको समर्थक संस्था ‘वी आर स्टार्स’ ले यस बारे सन्जाल वा फिल्डमा आफ्नो दायित्व पुरा गरेको देखियो ।
नेपाली फुटबलमा घटेका विभिन्न घटनाहरु यस्तै नौ दिनका नौलो, बिस दिन बिर्सयो मात्र भएका छन् । नेपाली खेलाडी कोही जीवन धान्न नसकेर खाडी, युरोप वा अन्य देश उड्दैछन्,कोही मोफसलका नकआउट प्रतियोगितामा ज्यालादारी रकममा खेल्दैछन् ।
दुई दिन अघि एउटा क्लबको जर्सी लगाएको खेलाडी अर्को दिन अर्को जर्सीमा देखिन्छ । त्यो नेपाली फुटबलमा सिजनको समाप्ती वा ट्रान्सफर ब्रेक पछिको बद्लाव होइन , एक गम्भिर नियती हो , जुन संसारमा सायदै यो सगरमाथाको देशमा मात्रै हुन्छ । यस्तै नेपाली फुटबलको सबै भन्दा गम्भिर क्षण , फिक्सिङ अर्थात खेल मिलेमतो गरी राष्ट्रलाई हराएका खेलाडी हरुको बिषय पनि दुईचार दिन चम्किलो घेरामै रह्यो र अस्तायो ।
एएफसीले आजिवन प्रतिबन्ध लगाएपछि , एउटा खेलाडीका लागि त्यो भन्दा ठुलो कारवाही अरु त के होला ? तर नेपालको न्यायलयले भने उनीहरुलाई प्रमाणित ग¥यो, अप्रमाणित ग¥यो वा छुट दियो , यो बिषय खुलेको छैन वा बाजेको पालामा परेको मुद्दा नातीको पालामा टुंगिने हो ? र यसले अहिले खासै कसैको महत्व पनि पाएको छैन । नेपाल , नेपाली समाजमा यस्ता अनेकन बिषयहरु छन् जसको बखान गरी साध्य छैन । अन्य कुरालाई थाती राख्दै , यो पङ्तीकार सोध्न चाहन्छ ? थ्री स्टारको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? थ्री स्टारले छ करोड पाउछ कि छ रुपैयाँ ?
मंगलबार, भाद्र ३, २०७६
रोमाञ्चक खेलमा बंगलादेशमाथि अफगानिस्तानको जित
काउटिन्हो लिन नसक्नु आर्थिक कारण !
फुटसल प्रशिक्षक नियुक्तिमा प्रशिक्षककै विरोध
सेन्ट्रल जोनमा आज तीन खेल, कीर्गिस्तानको समूह विजेता बन्ने दाउ